ကောင်မလေး Archives - Page4of6- BuzzFeed Myanmar
ဒီလို ကောင်မလေး မျိုးနဲ့တွေ့ရင် လက်မလွှတ်ပါနဲ့ ဖတ်ကြည့်
– သင့်အတွက် မျက်ရည်ကျ တတ်သောကောင်မလေး 😢😢😢– သင့်ကို အမြဲတမ်းအနိူင်ကျင့်ပြီး မြူထူးတတ်သော ကောင်မလေး 😄😄😄– သင့်ပါးပြင်ကိုလစ်ရင်လစ်သလို မွ မွ ပေးတတ်သော ကောင်မလေး 😘😘😘
ကြောက် တတ်သူများမဖတ်ပါနဲ့… အချစ်ကြီးတော့အမျက်ကြီးဆိုသလို အစွဲလည်းကြီးတဲ့ မိန်းခလေး…
နယ်စပ်မြို့ငယ်လေးတစ်မြို့မှာ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို ကောင်မလေးနှစ်ယောက်က ချစ်ကြိုက်နေတဲ့ ကျောင်းနေဖက် သူငယ်ချင်းသုံးယောက်ရှိပါတယ်…ကောင်လေးကတော့ ဘယ်သူ့ကိုမှ ချစ်စကားမဆိုပေမယ့် နှစ်ယောက်လုံးက သူ့ကိုချစ်နေကြတယ်ဆိုတာ သိနေခဲ့ပါတယ်…
၀တုတ်မလေး အဖြစ်ကနေ Body အလှပိုင်ရှင် အဖြစ် ပြောင်းလဲပြခဲ့တဲ့ ကောင်မလေး
အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ ပြောင်းလဲလာတဲ့ လူနေမှု Lifestyle ကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်များလာတာ၊ အဝလွန်လာတဲ့ ကိစ္စတွေဟာ တဖြည်းဖြည်း ပိုမိုများပြားလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဝိတ်ကျချင်သူတွေ၊ ဝိတ်ချဖို့ စိတ်ကူးရှိသူတွေ အတွက် Motivation တစ်ခုအနေနဲ့ မယုံနိုင်လောက်အောင် ဝိတ်ချပြနိုင်ခဲ့တဲ့ Sapna Vyas Pate ဆိုတဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။
သေးထွက်အောင် ရီရမယ့် ဟာသ ၃ ပုဒ်
အသက်ကြီးပိုင်း ဦးလေးကြိး တစ်ယောက်က အသက်ငယ်ငယ် ခပ်ချောချော ကောင်မလေး တစ်ယာက်ကိုယူပြီး အချိန် ကြာလာတဲ့အခါ မိန်းမ အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်နေတယ်လို့ ထင်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့ တစ်နေ့ အလုပ်ပ စောစော ပြန်လာပြီး အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့ အချိန်မှာတော့မိန်းမ က လင်ငယ်နဲ့ နောက်မီးလင်းနေတုန်း လင်ကြီး က တံခါး ကို ဆောင့်ကန် ဝင်လာတော့ အိပ်ခန်း ထဲမှာ လင်ငယ် နဲ့ ပက်ပင်း တိုးပါလေရော။
“ခြေသလုံးမွှေး တွေနဲ့” လို့ ချစ်သူ က ပြောတာကို ခံလိုက်ရတဲ့ သန္တာလှိုင်
သန္တာလှိုင်ရဲ့ အမျိုးသားက သူမရဲ့ ခြေထောက်ကို နမ်းရင်း “မာမီ ခြေသလုံးမွှေးတွေနဲ့” လို့ ပြောလိုက်ပါသတဲ့။ တကယ်က သူမခြေသလုံးက အမွှေးအမျှင်တွေက အနီးကပ်ကြည့်ရင်တောင်မမြင်ရလောက်အောင် သေးမျှင်နေပြီး မမြင်ရပါဘူးလို့ သူမက ပြန်လည်ပြောဆိုထားတာပါ။
ကောင်မလေး ဆီကအငြင်းခံလိုက်ရလို့ ကြိုးစားဝိတ်ချခဲ့ရာက ပျိုတိုင်းငေး မယ့်ပုံစံပြောင်းသွားနိုင်ခဲ့တဲ့ ထိုင်း လူငယ်
ချစ်ခွင့်ပန် ခဲ့တဲ့ ကောင်မလေး ဆီကနေ အငြင်းခံလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်မှာ ဝိတ်ချ မယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ် ချက်နဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့တဲ့ ဖက်တီးလေးက အခုတော့ ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းဆီခိုင် ဖြစ်သွား ခဲ့ပါတယ်။ အစားအသောက် နဲ့အဆီတက်စေတဲ့အစားတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်လွန်းလို့ ခန္ဓာကိုယ်က အသက်အရွယ် နဲ့ မလိုက်ဖက်အောင်ကို အဆီပိုတွေနဲ့ အဝလွန်နေခဲ့တဲ့ ထိုင်း လူငယ် လေးတစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မိန်းကလေး များ လုံးဝလုံးဝ သတိထားကြဖို့။ (တကယ့်အဖြစ်အပျက်လေးပါ)
မိန်းကလေး များ လုံးဝလုံးဝ သတိထားကြဖို့။ (တကယ့်အဖြစ်အပျက်လေးပါ) ဒီအဖြစ်အပျက်လေးကတကယ့်အဖြစ်အပျက်လေးပါ. သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးသင်ခန်းစာယူသင့်တယ်ထင်လို့ မျှဝေပေးတာပါ ကျောင်း သင်ခန်းစာ ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်က အချိန်အကုန်ခံပြီး လေ့လာသင်ယူကျက်မှတ်ရပါတယ်. ဘ၀နဲ့ ပက်သက်တဲ့ သင်ခန်းစာကိုတော့ မိမိ ပတ်ဝန်းကျင် မှာ တွေ့ နေ မြင်နေရတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကိုကြည့်ပြီး ကိုယ်တိုင်က အဲ့ ဒီလိုအမှားမျိုးမဖြစ်အောင် သတိနဲ့ ဆင်ခြင်နိုင်ရင်တော့..ကိုယ့်ဘ၀အတွက် အရင်းအနှီး စိုက်ထုတ်စရာမလိုပဲနဲ့ အလကားရတဲ့ အမြတ်ပေါ့နော်…
SINGAPORE နိင်ငံရှိ သရဲခြောက် သော ဆေးရုံ (ဖြစ်ရပ်မှန်)
ယနေ့အချိန်မှာတောစင်္ကာပူ ဟာ တိုးတက်လာတဲ့ကျွန်းနိုင်ငံလေးတစ်ခုပါ နောက်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်မှာ အလျင်အမြန်တိုးတက်လာတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဆိုလဲမမှားပါဘူး စင်္ကာပူလူမျိုး အများစု ကတော့ တရုတ်လူမျိုးကနေဆင်းသက်လာတာ လည်း သိပြီးလောက်ပါပြီ ၄င်းကျွန်းလေးဟာ အီကွေတာ ရဲ့ မြောက်ဘက် 85 မိုင် နှင့် အရှေ့တောင်အာရှ Malaysia Peninsula မလေးကျွန်းဆွယ်ရဲ့ တောင်ဘက်ယွန်းယွန်းလေးမှာ တည်ရှိနေပါသည်။
၁၂နှစ်အရွယ်မှာ လူ မှောင်ခိုကူး ခံခဲ့ရပြီး အကြိမ်ပေါင်း ၄၃၀၀၀ မုဒိန်းကျင့်  ခံခဲ့ရသူ
မက္ကဆီကို လူမှောင်ခိုသမားတွေလက်ထဲကို အသက် ၁၂နှစ်အရွယ်မှာ တရားမဝင်ရောက်သွားပြီးတဲ့နောက် အဲ့ဒီ့ကောင်မလေးဟာ ၄နှစ်တာအချိန်အတွင်း အကြိမ်ပေါင်း ခန့်မှန်းခြေ ၄၃၂၀၀ မုဒိန်းအကျင့်ခံခဲ့ရတယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်။အခုလို ထိတ်လန့်ဖွယ် လူကုန်ကူးမှုတွေကို သတိထားလာကြစေဖို့ မျှော်လင့်တဲ့အနေနဲ့ Karla Jacinto ဟာ သူ့ရဲ့ ကြေကွဲဖွယ်ဇာတ်လမ်းကို ဝေငှခဲ့ပါတယ်။ လူမှောင်ခိုကူးမှုတွေက ကမ္ဘာ့အနှံ့က မရေမတွက်နိုင်တဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ ဘဝကို ဖျက်စီးနေတာပါ။Jacinto ဟာ သူ့မိခင်ရဲ့ လျစ်လျူရှုမှုကို အမြဲခံခဲ့ရပြီး ငယ်စဉ်ကတည်းက အလွဲသုံးစားလုပ်မှုကို ခံခဲ့ရတယ်လို့ သူကပြောပါတယ်။
လွန်ခဲ့သော တစ်လခန့်က Beetalk ကနေ တွံတေးသူ ညောင်တံခါးကျေးရွာမှာနေတဲ့ ကောင်မလေးနဲ့ရီးစားဖြစ်ကြတယ်၊
ကောင်မလေး ၁၀တန်း ကျောင်းသူ မိဘတွေက အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့မို့ ဘွားအေနဲ့နေတယ်၊ဒီကောင်က တောင်ဥက္ကလာပမြိုနယ် အမှတ် ၂၆၉ ခ ၁လမ်း ၊ ၇ရပ်ကွက်၊သူနာမည်က ဥာဏ်ဖြိုးဦး ၂၄နှစ် (ဘ)ဦးအောင်ကျော်သူ တဲ့၊
ခလေးမလေးနဲ့သမီးရီးစားဖြစ်တော့ လူငယ်သဘာဝ ဖုန်းနံပါတ်တွေတောင်း ချစ်ကြောင်း ကြိုက်ကြောင်းတွေ အတိုင်းအဆမရှိပြော၊ဘဝလက်တွဲဖော်အဖြစ် ယှဉ်တွဲလျောက်လှမ်းမည်ဟု အယုံသွင်း ခလေးမလေးရဲ့ပင်ကိုယ်အလှတွေကို ဓာတ်ပုံအမျိုးမျိုးရိုက်ပို့ခိုင်းပြီး ယူထားလိုက်တယ်